Imithombo yeNtengiso yezeNtlalontle 101
Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ndiqala njani Imidiya yokuncokola? Lo ngumbuzo endiqhubeka nokuwufumana xa ndithetha ngempembelelo yemithombo yeendaba zentlalo kwishishini 'kwimizamo yokuthengisa. Kuqala, masixoxe ngokuba kutheni inkampani yakho ifuna ukusebenza kwimidiya yoluntu.
Izizathu zokuba amashishini asebenzise ukuThengisa amaJelo eeNdaba
Nantsi ividiyo ecacisa kakhulu ngeendlela ezi-7 zokuthengisa kwintengiso yemithombo yeendaba ezentlalo ezinokuqhuba iziphumo zeshishini.
Uqalisa njani ngeMidiya yeNtlalo
Khetha iiNethiwekhi zakho zoLuntu -Khangela amaqela amashishini awodwa kunye nabathengi phakathi kweqonga ngalinye leendaba zosasazo. Andinguye umlandeli wokukhetha nje enye kwaye ungayihoyi enye. Ndiyakholelwa ekubeni ungathatha inxaxheba kuwo onke amaqonga - kodwa jolisa kwaye ujolise apho amathuba aqala khona ukunyuka. Ayisiyiyo yonke into malunga nenani labantu ngokwe-infographic.
Gcwalisa iiprofayili zakho -Ukuba ndibona ifoto yohlobo oluqhelekileyo, imvelaphi engekhoyo, okanye iprofayile engaphelelanga, ndihlala ndithandabuza ukulandela okanye ukuzibandakanya nenkampani okanye umntu kwimidiya yoluntu. Thatha ixesha lakho lokumisela kunye nokubonelela ngenkangeleko ekhethekileyo, kodwa icace gca eyazisa injongo yakho yokuba lapho.
Fumana iLizwi lakho kunye neTone -Ukuhambelana kweBrand kubalulekile kwi-intanethi, ke qiniseka ukuba ubeka ithoni ehambelanayo xa usabelana kwaye uphendula kwimidiya yoluntu. Gcina ukhumbula ukuba lihlabathi elixakekileyo, elinengxolo phaya, ungadinisi!
Faka izinto eziBonwayo -Imifanekiso kunye nevidiyo zichaphazela ukubandakanyeka kunye nokwabelana ngohlaziyo lwakho lweendaba zosasazo ngokubonakalayo. Thatha iifoto, faka ividiyo, cwangcisa ezinye zevidiyo zexesha lokwenyani, kwaye wabelane ngeebhulukhwe ezimfutshane zevidiyo kumabali akwi-intanethi ukuze wenze uninzi lweqonga ngalinye onqwenela ukuzibandakanya nalo.
Khetha iSicwangciso sakho sokuThumela -Kutsha nje, rhoqo, kwaye kufanelekile yimiqathango emithathu esiyityhaleleyo kule minyaka ilishumi idlulileyo kunye nabaxumi bethu kwaye iya kuqhubeka nokutyhala kule minyaka ilishumi izayo. Ukubonelela ngexabiso kubalandeli bakho kubalulekile! Andinguye umlandeli wayo nayiphi na imilinganiselo yokwabelana, yabelana xa inexabiso kubaphulaphuli bakho okanye eluntwini.
Phuhlisa iCadence -Abalandeli bakho kunye nabalandeli bakho baya kulindela uhlaziyo lwamva nje kunye nolwenzeka rhoqo kuwe. Imidiya yokuncokola ihlala ingumdlalo wesantya njengoko umxholo wakho kwabelwana ngawo kwaye uyathandwa. Sukutyhafa ekuqalekeni ngokulandela okuncinci kunye nezabelo ezincinci… qhubeka nje usebenze kuyo kwaye unganikezeli! Ukuba uyayeka-nangasiphi na isizathu-uya kuhlala ufumana ukwehla okubalulekileyo ekufuneka ukoyisile kwakhona.
Cwangcisa iKhalenda yakho yoLuntu -Ngaba kukho ixesha lakho kwishishini lakho? Ngaba zikho iinkcukacha-manani ezifanelekileyo onokuthi uphinde uzilayishe kwaye uzicwangcise kwiiprofayili zakho zemidiya yoluntu? Ngaba unokukhetha isihloko onokuthetha ngaso inyanga nenyanga okanye kwiveki nganye kwi-intanethi? Ukucwangcisa ikhalenda yakho yezentlalo yindlela entle yokukhulisa igunya lakho kwimidiya yoluntu, kwaye ikuvumela ukuba uhlekise ngekamva kwaye ukhumbuze abantu bexesha elidlulileyo ukuze banamathele kuwe.
Ungalibali umnxeba wokuthatha isenzo - Umthetho soloko uthengisa ayisebenzi neMedia Media… kodwa soloko unolwazig yenza! Injongo yakho kufuneka ibe kukwazisa kunye nokubonelela ngexabiso kwinethiwekhi yakho. Rhoqo ngexeshana, bakhumbuze ngento abanokuyenza ngokulandelayo ukuzibandakanya nawe kunye neemveliso kunye neenkonzo zakho. Faka i-Call-to-Action kwiprofayili yakho yentlalo, yindlela efanelekileyo yokuqhuba ishishini.
Ukuba bendifundisa i Imithombo yeNtengiso yezeNtlalontle 101 kwiklasi, ndingongeza iindlela ezimbalwa eziphambili ezingekhoyo kule infographic:
Ukubeka iliso kwiNdawo Sebenzisa isixhobo esikhulu sokujonga imidiya yoluntu, kufuneka umamele nakuphi na ukukhankanywa kweemveliso zakho, iinkonzo okanye abantu. Izilumkiso zexesha langempela kunye neempendulo ezikhawulezileyo kunye nezisombululo zibalulekile.
Ubuntlola beNtlalo Unxibelelwano kwimidiya yoluntu lubonelela ngobutyebi bolwazi ekufuneka inkampani yakho ihoye. Ukulindela imibuzo, ingxelo yabathengi, kunye nolwazi oluqhubekayo lunokunika ulwazi oluxabisekileyo kwishishini lakho ukuba lisebenze.
Inkonzo eyenzelwe -Ngoku, kunanini na ngaphambili, abathengi kunye namashishini ngokufanayo balindele ukuba iinkampani ziphendule kwizicelo zazo zeenkonzo zabathengi ngeendlela zentlalo. Kuba imithombo yeendaba zentlalo yiforum yoluntu, lithuba elihle lokuba amashishini abonise amandla abo okuzisa isisombululo kwimicimbi yeenkonzo zabathengi apho abanye baya kuyibona njengempahla yexabiso.
Misela iinjongo kunye nokujonga ukusebenza -Imisebenzi efana nale ilandelayo, ukubandakanyeka, uvakalelo, kunye nokwabelana zizikhombisi ezikhokelayo ekufuneka imeko yazo ijongwe. Imidiya yokuncokola inokuqhuba ukwazisa kunye nokwazisa kunokuqhuba igunya kunye nentembelo. Igunya kunye nokuthembela kunokuchaphazela isikhundla seinjini yokukhangela. Kwaye, ewe, konke oku kunokuqhuba iziphumo zeshishini njengokugcina, ukufumana kunye nokunyusa ixabiso labathengi.
Le infographic evela I-venngage uhamba ishishini ngokumisela nokuphuhlisa isicwangciso-qhinga sokuthengisa ngokusebenzisa imidiya yoluntu. Kwaye kukho iingcebiso ezilungileyo apha kumthengisi omiselweyo ngokunjalo!
tags: Inkonzo eyenzelweNdiyaqalisaulawulo lwegamaesweni igamauvakaleloubukrelekrele kwezentlaloImidiya yokuncokolaukufunyanwa kwimidiya yoluntuiinjongo zeendaba ezentlaloukusebenza kweendaba zosasazoukugcinwa kweendaba zosasazoisicwangciso seendaba zoluntuqalisa imidiya yoluntuimpindezelo